Generation Next Teknolojiyada CDN waxay ku saabsan tahay In ka badan oo kaliya Qafis | Martech Zone
Jiilka xiga ee Teknolojiyada CDN wuxuu ku saabsan yahay in ka badan Khariidadda
Jimcaha, Agoosto 14, 2015 Jason Miller
Adduunyada maanta isku xiran ee xad-dhaafka ah, isticmaaleyaashu khadka tooska ah ugama baxaan, si joogto ah ayey khadka u galaan, xirfadlayaal suuqgeynta ahna waxay u baahan yihiin teknoolojiyad casri ah si ay u soo gudbiyaan khibrad macaamiil oo tayo leh. Sababtaas awgeed, qaar badan ayaa horeba u yaqaana adeegyada caadiga ah ee a shabakada bixinta nuxurka (CDN), sida keydinta. Kuwa aan aqoon u lahayn CDN-yada, tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo si ku-meelgaar ah loo keydinayo nuqullada qoraalka ma guurtada ah, sawirrada, maqalka iyo fiidiyowga ee server-yada, sidaas darteed marka xigta ee uu adeegsade u galo marintan, waxaa loo soo diri doonaa si ka dhakhso badan sidii ay ahayd lama kaydin.
Laakiin tani waa hal tusaale oo aasaasi ah oo ah waxa CDN ay bixiso. Suuqyayaashu waxay ka faa'iideysanayaan jiilka xiga CDNs qaabab fara badan oo loola xiriiro dhagaystayaasha isla markaana looga adkaado caqabadaha bixinta khibrad macmiil aan kala go 'lahayn oo ku baahsan aalado badan, isku xirnaansho kala duwan iyo codsiyo shabakadeed aad u adag.
Waa kuwan qaar ka mid ah shaqooyinka muhiimka ah ee loogu talagalay hagaajinta khibrada macaamiisha:
Ka Hortagga Dhamaadka Hore
Dhinaca Server ka jawaab celin ah (RESS)
Marka lagu daro waqtiyada xamuulka bogga gaaban, ku habboonaynta joogitaanka websaydhkaaga aalado kala duwan ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u ah abuurista khibrado macmiil oo weyn. Shaqaalaynta naqshadeynta websaydhka jawaabta leh (RWD) waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo lagu caawiyo tan. Tusaale ahaan, RWD waxay hubisaa in marka mobiil ama kaniini dukaameyste booqdo degel, sawirradu ay dareerayaan oo hantida kale si habboon loo cabbirayo, marka isticmaaleyaashu iskuma dayaan inay maraan nooca desktop-ka ee degelku adoo qanjaruufaya oo dhaweynaya. Si kastaba ha noqotee, RWD waxay leedahay hoos u dhac taas oo ah inay u nugul tahay wax ka badan soo dejinta tan iyo markii ay u dirto isla sawirada iyo HTML qalabka moobiilka ee ay u dirto desktop-ka. Isticmaalka RWD oo leh astaamaha astaamaha astaamaha astaamaha waxay u habeyn karaan waxyaabaha dhabta ah ee loo gudbiyo kooxaha qalabka waxayna si aad ah u yareyn kartaa cabirka bogga soo dejinta iyo kordhinta waxqabadka.
Cadaadiska Sawirka La Qabsiga
In kasta oo RWD ay sawirrada ka dhigi doonto dheecaan si ay si habboon ugu habboonaadaan iyada oo ku saleysan cabbirka shaashadda aaladda, haddana waxay weli u adeegsan doontaa sawir cabbirka la mid ah sida ka muuqata dusha sare. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa isticmaaleyaashaada qunyar socodka 3G ama shabakadaha daahitaanka sare waxaa looga baahan yahay inay soo dejiyaan sawir dhowr megabeyte ah oo kaliya inay ku tusaan cabirka shaabadda boostada. Xalku waa in loo diro isticmaalaha oo kaliya cabirka sawirka ku habboon xaaladahooda shabakadeed ee hadda jira. Cadaadiska muuqaalka la qabsiga ayaa tan ku fulinaya iyada oo la tixgelinayo isku xirnaanta shabakadda ee hadda, daahitaanka iyo aaladda ka dibna ku cadaadinaysa sawirka waqtiga-dhabta ah si loo helo dheelitirka u dhexeeya tayada sawirka iyo waqtiga soo dejinta si loo hubiyo in isticmaaleyaashu ay marin u heli karaan sawirro tayo sare leh iyadoon wax dhibaato ah ka gaarin waxqabadka .
EdgeStart - Xawaaree waqtiga ugu horreeya byte
Si fudud haddii loo dhigo, haddii aad kaliya kaydineyso waxyaabaha ku jira, waxaad seegaysaa faa iidooyin badan oo ah habka madal caqli-gal ah. Suuqyayaashu waa inay ahaadaan sida ay ula socdaan oo u dalbadaan tikniyoolajiyadda macaamiishooda haddii ay doonayaan inay guuleystaan. Oo hadday tani u muuqato inay tahay hawl aad u fara badan, maahan inay taasi ahaato. Waxaa jira khubaro loo heli karo inay kaa caawiyaan inay kugu hagaan adeegyada saxda ah ee ku habboon shirkaddaada iyo adeegsadayaashaada dhammaadka baahiyahooda.
Tags: akamaiEdgestarthagaajinta dhamaadka horexawaaraha boggadhinaca serverka wax ka qabtanasashoxawaaraha goobtaxawaaraha
Jason Miller waa Madaxa Istiraatiijiyadda Ganacsiga ee Akamai Technologies, oo ah Akamai Platform Intelligent wuxuu siiyaa adeegsadayaasha waxqabadka shabakada, waxqabadka moobiilka, amniga daruuraha iyo xalalka bixinta warbaahinta si loo maareeyo dhibaatooyinka aasaasiga ah ee ganacsiyada khadka tooska ah, iyada oo marin u ah shabakad ka badan in ka badan 170,000 oo server adduunka oo dhan ah.
40Nuggets: Hawlgal oo Beddel adoon booqdeyaasha xanaaqsaneyn